Salaamanews » Ururrada siyaasadda Puntland oo wajahaya shuruudo adag
Home » Warar Ururrada siyaasadda Puntland oo wajahaya shuruudo adag Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 5th, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Ra’isal wasaare Shirdoon oo ka tacseeyay geerida wasiiru-dowle ka tirsan xukuumaddaXiisad isa soo taraysa xilli ay laba hogaamiye sheeganayaan madaxwaynanimada JubbalandShacabka Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweyey madaxweynahooda cusub Xassan Sheekh Maxamuud (Dhageyso codadkooda)Ra’isal wasaaraha oo codka kalsoonida loo qaadayoMadaxweyne Siilaanyo oo Turkiga uga qeyb galaya shir u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland
Guddiga KMG ah ee doorashada ee maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe kula kulmay lixda urur siyaasadeed ee ka soo gudbay shuruudihii la hordhigay ee ay uga mid noqdeen xisbiyada siyaasadeed ee maamulka.
Guddiga iyo xisbiyada ayaa ka dooday wejiga labaad iyo shuruudaha hor yaalla iyo sida looga gudbi karo, waxaana la shaaciyay inaan la qaban doonin araajida axsaabta qaar oo goor dhaw shuruudda soo buuxiyay.
Guddoomiyaha KMG ah ee guddiga Maxamed Xasan Barre ayaa sheegay in guddiga iyo ururrada ay isku raaceen in la buuxiyo shuruudaha kale ee xiga ee wejiga saddexaad.
Maxamed Xasan Barre wuxuu sheegay xisbigii ka gudba shuruudaha kale ee xiga uu u gudbi doono wareegga xiga, uuna ka qeyb qaadan doono tartamada doorashooyinka.
Doorashada maamulka Puntland xilliga ay dhaceyso ayaan la ogeyn, waxaana jira hadallo is dhinac socda oo ka soo baxaya siyaasiyiinta maamulka Puntland.
Tags: warar « Qoraalkii HoreGudoomiyeyaasha guddiyada baarlamaanka oo la doortay	Qoraalka Xiga »Warbixin iyo muuqaal: Raafka Kenya iyo Soomaalida oo bilowday in ay dib ugu noqdaan dalkooda	Halkan Hoose ku Jawaab